Mpanazava: Ahoana no hahafahan’ny Lalàna Amerikana momba ny zon’olombelona sy ny demokrasia hiaro ny fahalalahana ao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Inoan'ireo Demaokraty ao Hong-Kong ilay Lalàna ho tsindrinentan'ny fanitsakitsahan'i Shina
Voadika ny 25 Desambra 2019 8:38 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, Italiano, русский, Français, Español, Ελληνικά, English
Maniry ireo mpanao fihetsiketsehana ao Hong Kong ny mba hankatoavan'ny governemanta Amerikana ny Zon'olombelona sy ny Lalàna momba ny Demokrasia sy ny Zon'Olombelona ao Hong Kong, matetika no hita ao amin'ireo toerana anaovana fanoherana manodidina an'i Hong Kong ireo saina Amerikana. Sary avy amin'i Stand News.
Ny 20 novambra 2019, nandany lalàna iray mitsinjo ny fiarovana ny Sata fizakantena ananan'i Hong Kong sy ireo zo sivilin'ireo mponina ao aminy ny antenimieram-doholona ao Etazonia
Novolavolaina tamin'ny taona 2014 ary naseho indray teo amin'ny Kaomisionan'ny Antenimiera Amerikàna tamin'ny 13 jona 2019 — taoriana kelin'ny fipoahan'ireo fihetsiketsehana fanoherana ny fanolorana olomeloka – ny Lalàna ao Hong Kong momba ny Zon'olombelona sy ny Hetsika Demokratika dia manome antoka fa isantaona ny Departemanta Amerikàna dia hanao tatitra amin'ny Kaongresy mikasika ny fizakantenan'i Hong Kong sy ny sata mikasika ny Zon'olombelona, mba hamaritana raha toa tokony hanohy ny fifandraisana manokana misy eo amin'ny tany roa tonta i Etazonia, na tsia. Ireo mpiasam-panjakana ao Hong Kong izay fantatra fa tomponantoka tamin'ny fanafoanana an'ireo fahafahana dia ho helohina amin'ny alàlan'ireo fandraràna fahazoana mivahiny sy ny fanagiazana fananana.
Koa satria ny Tranoben'ireo Solontena ao Amerika nandatsa-bato tamin'ny 21 novambra mba handaniana ilay Lalàna avy amin'ny Loholona, ny dingana farany dia mitondra mankany amin'ny sonia ataon'ny filoham-pirenena Amerikàna, Donald Trump, ato anatin'ny andro vitsy hoavy.
Tezitra mafy i Beijing tamin'ny fihetsiky ny Loholona nandany ilay Lalàna i Beijing. Ny mpitondrateniny ao amin'ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny, Geng Shuang, niampanga an'io ho toy ny fitsabahan'ny vahiny ary nandrahona fa mety hisy ” vokadratsy”.
Ho an'ireo rehetra izay tsy maharaka ny tantaran'ny fanjanahana an'i Hong Kong sy ny firafitra ara-politikan'ilay tanàna, dia mety hitranga mihitsy ho sahala amin'ny fitsabahan'ny avy any ivelany ity lalàna Amerikana mikasika an'i Hong Kong ity. Kanefa, hatramin'ny nanolorana an'i Hong Kong tamin'i Shina tamin'ny taona 1997, fifanarahana iraisampirenena no niantoka ny sata fizakàntenan'ilay tanàna – ny Fanambaràna iombonana Shina-Britanika tamin'ny taona 1984 – izay mametraka ny fotokevitra hoe “firenena iray, rafitra roa“. Izy io no mamaritra ny lalàna fehizoron'ny lalàm-panorenana kely ho an'ilay tanàna, ny Lalàna Fototra , sady miantoka fa i Hong Kong dia ho anisan'ireo mpanao sonia an'ireo Fifanekena marobe ao amin'i Firenena Mikambana, anisan'izany ny Fifanekena mikasika ny zon'olombelona.
Taorian'ny fandripahana tao amin'ny Kianjan'i Tiananmen tao Shina tamin'ny 1989, nankatoavin'ny governemanta amerikàna ny Lalàna Politika Hong Kong tamin'ny 1992, mba hiantohana ny sata fizakantenàn'i Hong Kong ho toy ny fepetra savaranonando amin'ny fitantanana ara-toekarena manokana an'i Hong Kong amin'ny maha-faritra fadintseranana sy fandraharahana ara-barotra miavaka. Ity lalàna ity dia ahafahan'i Hong Kong manana fifandraisana mifamaly mahomby ao anatin'ireo sehatry ny varotra sy ny toekarena, ny ara-bola, ny resaka sidina an'habakabaka, fitaterana an-dranomasina ary ny teknolojia.
Fa hatramin'ny 2014, taona izay nanolorana voalohany indrindra ilay lalàna mikasika ny zon'olombelona sy ny demokrasia ao Hong Kong, vetivety dia levona ny vetivety ny fizakantenan'i Hong Kong, fiovàna nohafainganin'ny fandikan'i Beijing indray ny Lalàna Fototra. Ny 31 aogositra 2014, ho ampahany amin'ny fanavaozana ny fifidianana dia napetrak'i Shina ny rafitra fanivanana tamin'ny fifidianana izay ho filoha mpanatanteraka any Hong Kong. Tamin'ny 2016, nisy ny fakàna an-keriny an'ireo mpivarotra boky ary, herintaona taty aoriana, ny tsy fahafahan'ireo mpanao lalàna nanao ny asany intsony noho ny fianianana tsy hivadika nataon-dry zareo .
Mandritra io fotoana io, tsy nanana fitaovana ara-dalàna mihitsy ny governemanta Amerikana mba hiatrehana ny zavamisy, tsy nahitana fomba fiasa nahafahana nijerena indray ny sata fizakantenan'i Hong Kong ny Lalàna Politika Hong Kong tamin'ny taona 1992. Naseho tamin'ny taona 2017 teo anatrehan'ny Kaongresy Amerikana noho izany ny volavolan-dalàna iray mikasika ny zon'olombelona sy ny Demokrasia any Hong Kong, saingy nahilika ny fanitsiana ilay lalàna lany andro tamin'ny taona 1992 natao tamin'ilay Lalàna Politka Hong Kong mandra-pipaokan'ny Jona 2019 nipoahan'ireo fihetsiketsehana manohitra ny fanolorana olomeloka.
Ilay lalàna vaovao dia ahitana rafitra fanarahamaso sy sazy hiantohana fa hoe ny “sata fizakantenan'ny tanàna” dia mifanaraka amin'ny fanambaràna iombonana Shina-Britanika ary ireo Fifanekena zon'olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana. Ny dika farany amin'ilay lalàna nataon'ny Loholona Amerikana dia manitrikitrika ny sata iraisam-pirenena ananan'i Hong Kong amin'ny alalan'ny fanipihana fa ny governemanta Amerikana dia “tokony handrindra ireo mpiara-dia aminy, anisan'izany ny Royaume-Uni, Aostralia, Kanadà, Japàna, ary ny Repoblikan'i Korea” mba hampiroboroboana ny demokrasia sy ny zon'olombelona ao Hong Kong”.
Manome tombana amin'ny antsipirihany momba ireo zon'ny olona ao anati'ireto sehatra manaraka ireto ilay Lalàna: ny fanabeazana, ny fahafahana maneho hevitra (anisan'izany ny Aterineto), ary ireo asan'ny polisy sy ny fiarovana ny filaminana – resahana any anatin'ireo tatitra mahazatra. Omeny ny governemanta Amerikana ihany koa ny fahefana hanakana ireo mpanao gazety miasa ho an'ireo fikambanana media mifandray amin'ny Antoko Kaominista Shinoa ao Hong Kong tsy ho afaka ho any Etazonia, sy misakana ny fitaovana rehetra momba ny fanarahamaso sy fifehezana ny daholobe, izay mety ho ampiasaina amin'ny fomba tsy araka ny tokony ho izy any Hong Kong.
Tamin'ny alàlan'ny kaonty Twitter an'ny Radio Free Asia i Rebel Pepper, mpanao sariitatra politika, no nanoritsoritra ireo fiantraikan'ilay Lalàna vaovao momba an'i Hong Kong:
Melohin'i Shina ny lalàna Amerikana iray miaro ny zon'olombelona ao Hong Kong. Ny Lalàna momba ny Zon'olombelona sy ny Hetsika Demokratika ao Hong Kong dia manasazy an'ireo mpiasam-panjakana voarohirohy tamin'ny fanararaotana ny zo tao an-tanàna. Nandrahona hanao valifaty i Beijing raha nanao sonia mamadika ilay volavolan-dalàna ho lasa lalàna ny filoham-pirenena Trump.
Toa an'i Rebel Pepper, ny ankabeazan'ireo olona mpandàla demokrasia ao Hong Kong dia mino fa ho tsindrinentana amin'ny fanitsakitsahan'i Shina an'i Hong Kong ilay Lalàna, indrindra indrindra fa ny sata fizakantena amin'ny resaka fadintseranana sy ara-barotr'ilay tanàna, eken'ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena, no fanalahidin'ny fahombiazana ara-bola erantany.
Miankina amin'i Hong Kong i Shina mba hisarihana an'ireo renivola sy ireo famatsiambola avy any ivelany. Tamin'ny 2018, tamin'ireo 64,2 lavitrisa dolara azon'ireo orinasa shinoa erantany avy amin'ireo fanohanana ara-bola nataon'ny fanjakàna tany am-boalohany, maherin'ny 50% – tetibidy 35 lavitrisa dolara – no avy amin'ny tsenam-bola tao Hong Kong. Tsy nitondra afa-tsy 19,7 lavitrisa dolara monja ireo firaketana avy amin'ireo tanàna Shinoa.
Satria mihahenjana hatrany ny ady ara-toekarena nifanaovan'i Shina sy Etazonia, ny Kitapom-bolan'i Hong Kong kosa efa tany am-boalohany no natokana hividianana ny Tsena Fanakalozam-bolan'i Londona (LSE) mba hananganana fantsona bebe kokoa ho an'ireo orinasa shinoa hisarihana an'ireo renivola avy any ivelany eo amin'ny tsenam-bola erantany, saingy taorian'ny nandàvan'ny mpitantana ny LSE tsy hanaiky an'ity lalao ity tamin'ny Oktobra, dia mbola nijanona ho i Hong Kong no loharanom-bola vahiny voalohany ho an'i Shina.
Ao ambadik'izany anefa, i Etazonia ihany koa dia manana tombontsoa goavana ara-toekarena ao Hong Kong. Tamin'ny 2018, ny tombony ara-toekarena lehibe indrindra azon'i Etazonia tamin'ny fifanakalozana ifanaovana amin'ny any ivelany – 31,1 miliara dolara Amerikana – dia niarahana tamin'i Hong Kong. Ny fanafoanana ny sata maha-faritra fadintseranana miavaka sy ara-barotra an'i Hong Kong dia hanimba ireo tombontsoa ara-toekarena Amerikana.
Raha toa tsy azo eritreretina ny hamahàn'i Shina ny vahohony ao Hong Kong, dia mety mila mandinika tsara i Beijing amin'ny firotsahany an-tsehatra maherihery setra manimba ny fizakantena politika sy araka ny lalàna sitrahan'ny tanàna io. Ny fahamarinan-toeran'i Hong Kong dia mety ho tombony ho an'ireo ankolafy rehetra, sahala amin'ny mety haharatsy fotsiny izao ny fanafoanana ny fizakantenan'ilay tanàna ho an'ireo ankolafy rehetra voakasika.